သင့်ကို အမြန်ဆုံး ဆင်းရဲစေနိုင်တဲ့ အမူ အကျင့် (၅) မျိုး – Let Pan Daily
ချမ်းသာမယ့် နည်းလမ်း ဆိုတာ ရှိသလို၊ ဆင်းရဲမယ့် နည်းလမ်းတွေ လည်း ရှိပါတယ်။
ချမ်းသာမယ့်နည်းလမ်းကို မသိသေးသူတွေက ဆင်းရဲစေမယ့် နည်းလမ်းတွေ ကို ရအောင်ရှောင်ရှား လိုက်တာနဲ့ ချမ်းသာမယ့်နည်းလမ်းကို တစ်ဖက်ကနေ ပြန်လည်ကျင့်သုံးရာ ရောက်စေမှာပါ။
အခုဖော်ပြပေး မှာကတော့ သင့်ကို အမြန် ဆုံး ဆင်းရဲစေနိုင်တဲ့ အမူအကျင့်(၁၀)မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ရှောင်ရှားကြပါ။
(၁) ကိုယ်ရှာနိုင်တာ ထက် ပိုသုံးရင်
တစ်ချို့တွေက အသုံးနဲ့အဖြုန်း မကွဲကြပါဘူး။ တစ်ချို့ ငွေသုံး အလွန်ကြမ်းပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ သေချာပေါက် မချမ်းသာကြဘူးဆိုတာ သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။
မအပ်စပ်သောအရာဆိုတာက တစ်ခါတလေ ဂုဏ်ပကာသန တစ်ခုအတွက် ငွေကြေးကို ဒလဟောသုံးတာမျိုးပါ။
ဥပမာအနေနဲ့ မြင်သာအောင်ပြောရရင် သုံးနှစ်လောက် နေလို့ဖြစ်နေတဲ့ အိမ်ကို သူများဆီကနေ အကြွေးခံပြီး ပြန်ဖျက်ဆောက်တာတို့ ဘာတို့ပေါ့။ အကြွေးအတွက် အတိုးက ဆပ်နေရလို့ အကြွေးနွံနစ်နေပါတယ်။
အလွန်ဈေးကြီးတဲ့ အစားအစာတွေကိုပဲ နေ့စဉ်လိုလို စားနေတာ မျိုးပေါ့။ တစ်ချို့က ငွေကုန်ကြေးကျများမှ ဂုဏ်ရှိတာလို့ ထင်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒါကလည်း လူမှုရေးဘက်ကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ သင်ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ လောက်လောက်လားလား မကူညီဖူးဘူး၊ အားလုံးကို အပေါ်စီးကနေ ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသူ၊ အကူအညီလာတောင်းသူ မှန်သမျှကို ခပ်ပျက်ပျက် ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောပြီး မောင်းထုတ်တတ်သူဆိုရင် သင် ဒုက္ခရောက်နေချိန် မှာ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို လာပြီးကူညီမယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ ဒီတော့ လူလောကမှာ နေထိုင်မယ်ဆိုရင် ကိုင်းကျွန်းမှီ၊ ကျွန်းကိုင်းမှီစိတ်ဓာတ် ထားရမှာပါ။
လူတစ်ယောက်ကို ဆင်းရဲတွင်းထဲမှာ ကြာရှည် နစ်စေတဲ့ အရာကတော့ အကြွေးပါဘဲ။ လက်ရှိ အရပ်ထဲမှာ ငွေတိုးချေးစားသူတွေနဲ့သာ ငွေကြေးကိစ္စ အလုပ်လုပ်ပါက အတော်လေး ကြောက်စရာကောင်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့က လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ အတိုးနှုန်းနဲ့ ငွေတိုးချေးစားနေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ငွေကို အတိုးနဲ့ယူသုံးတာက လက်တလော အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် ရေရှည် မှာ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာ ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်။
(၅) လောင်းကစားနဲ့ အပျော် အပါးမက်ခြင်း….
တစ်ချို့တွေက ငွေစကြေးစလေး ရွှင်လာပြီဆိုရင် တစ်ထိုင်တည်း နဲ့ ပိုက်ဆံ ဂဏန်းငါးလုံးလောက် အသာလေးကုန်နိုင်တဲ့ ဘီယာဆိုင်တို့၊ ကေတီဗွီတို့၊ မာဆက်တို့ကို မျက်စောင်းထိုးချင်ကြပါတယ်။
တစ်ချို့က ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ငွေမျော ငွေနဲ့လိုက်-ဆိုပြီး လောင်းကစား ကို ဝါသနာထုံကြပါတယ်။ လောင်းကစားဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ လူကို သုခတရားတွေ ပေးစွမ်းတာမျိုး မရှိပါဘူး။
တစ်ချို့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာ လောလောဆယ် ကံလိုက်နေ လို့ပါ။ လောင်းကစားသမားတွေအများစုကို ကြည့်လိုက်ပါ … ဘယ်သူက လူမွေးလူရောင် ပြောင်လို့လဲ။
ဒီလိုပဲ တစ်ချို့က ငွေရွှင်ပြီဆိုရင် မိန်းမဘက် ကို လှည့်တတ်ကြပါတယ်။ အပျော်အပါး ဘက်ကို လှည့်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုမိန်းမဆိုတာ ငွေက ဘယ်ခလုတ်ကို နှိပ်ရင်ထွက်တယ်ဆိုတာ သိပြီးသား မိန်းမလည်တွေက များပါတယ်။
နောက် ရောဂါဘယ ကူးစက်မှုရှိ၊ မရှိကလည်း စိတ်မချရပါဘူး။ သင့်အတွက် ဆင်းရဲ တွင်းနက်စေမယ့် အမူအကျင့်တွေမို့ ရှောင်ရှားဖို့ လိုပါတယ်။
ခမျြးသာမယျ့ နညျးလမျး ဆိုတာ ရှိသလို၊ ဆငျးရဲမယျ့ နညျးလမျးတှေ လညျး ရှိပါတယျ။
ခမျြးသာမယျ့နညျးလမျးကို မသိသေးသူတှကေ ဆငျးရဲစမေယျ့ နညျးလမျးတှေ ကို ရအောငျရှောငျရှား လိုကျတာနဲ့ ခမျြးသာမယျ့နညျးလမျးကို တဈဖကျကနေ ပွနျလညျကငျြ့သုံးရာ ရောကျစမှောပါ။
အခုဖျောပွပေး မှာကတော့ သငျ့ကို အမွနျ ဆုံး ဆငျးရဲစနေိုငျတဲ့ အမူအကငျြ့(၁၀)မြိုး ဖွဈပါတယျ။ ရှောငျရှားကွပါ။
(၁) ကိုယျရှာနိုငျတာ ထကျ ပိုသုံးရငျ
တဈခြို့တှကေ အသုံးနဲ့အဖွုနျး မကှဲကွပါဘူး။ တဈခြို့ ငှသေုံး အလှနျကွမျးပါတယျ။ ဒီလူတှဟော သခြောပေါကျ မခမျြးသာကွဘူးဆိုတာ သတိခပျြစခေငျြပါတယျ။
မအပျစပျသောအရာဆိုတာက တဈခါတလေ ဂုဏျပကာသန တဈခုအတှကျ ငှကွေေးကို ဒလဟောသုံးတာမြိုးပါ။
ဥပမာအနနေဲ့ မွငျသာအောငျပွောရရငျ သုံးနှဈလောကျ နလေို့ဖွဈနတေဲ့ အိမျကို သူမြားဆီကနေ အကွှေးခံပွီး ပွနျဖကျြဆောကျတာတို့ ဘာတို့ပေါ့။ အကွှေးအတှကျ အတိုးက ဆပျနရေလို့ အကွှေးနှံနဈနပေါတယျ။
အလှနျဈေးကွီးတဲ့ အစားအစာတှကေိုပဲ နစေ့ဉျလိုလို စားနတော မြိုးပေါ့။ တဈခြို့က ငှကေုနျကွေးကမြားမှ ဂုဏျရှိတာလို့ ထငျတဲ့သူတှလေညျး ရှိပါတယျ။
ဒါကလညျး လူမှုရေးဘကျကနေ ကွညျ့မယျဆိုရငျ မဖွဈသငျ့တဲ့ ကိစ်စပါ။ သငျဟာ ဘယျသူ့ကိုမှ လောကျလောကျလားလား မကူညီဖူးဘူး၊ အားလုံးကို အပျေါစီးကနေ ဆကျဆံခဲ့ဖူးသူ၊ အကူအညီလာတောငျးသူ မှနျသမြှကို ခပျပကျြပကျြ ခပျရိုငျးရိုငျးပွောပွီး မောငျးထုတျတတျသူဆိုရငျ သငျ ဒုက်ခရောကျနခြေိနျ မှာ တဈယောကျယောကျက သငျ့ကို လာပွီးကူညီမယျလို့ မမြှျောလငျ့ပါနဲ့။ ဒီတော့ လူလောကမှာ နထေိုငျမယျဆိုရငျ ကိုငျးကြှနျးမှီ၊ ကြှနျးကိုငျးမှီစိတျဓာတျ ထားရမှာပါ။
လူတဈယောကျကို ဆငျးရဲတှငျးထဲမှာ ကွာရှညျ နဈစတေဲ့ အရာကတော့ အကွှေးပါဘဲ။ လကျရှိ အရပျထဲမှာ ငှတေိုးခြေးစားသူတှနေဲ့သာ ငှကွေေးကိစ်စ အလုပျလုပျပါက အတျောလေး ကွောကျစရာကောငျးတာကို တှရေ့ပါတယျ။ တဈခြို့က လုံးဝမဖွဈသငျ့တဲ့ အတိုးနှုနျးနဲ့ ငှတေိုးခြေးစားနတောတှလေညျး ရှိပါတယျ။
ငှကေို အတိုးနဲ့ယူသုံးတာက လကျတလော အဆငျပွနေိုငျပမေယျ့ ရရှေညျ မှာ အဆငျမပွနေိုငျဘူးဆိုတာ ကောငျးကောငျးသဘောပေါကျဖို့ လိုပါတယျ။
(၅) လောငျးကစားနဲ့ အပြျော အပါးမကျခွငျး….
တဈခြို့တှကေ ငှစေကွေးစလေး ရှငျလာပွီဆိုရငျ တဈထိုငျတညျး နဲ့ ပိုကျဆံ ဂဏနျးငါးလုံးလောကျ အသာလေးကုနျနိုငျတဲ့ ဘီယာဆိုငျတို့၊ ကတေီဗှီတို့၊ မာဆကျတို့ကို မကျြစောငျးထိုးခငျြကွပါတယျ။
တဈခြို့က ဒီလိုမဟုတျပဲ ငှမြေော ငှနေဲ့လိုကျ-ဆိုပွီး လောငျးကစား ကို ဝါသနာထုံကွပါတယျ။ လောငျးကစားဆိုတာ ဘယျတုနျးကမှ လူကို သုခတရားတှေ ပေးစှမျးတာမြိုး မရှိပါဘူး။
တဈခြို့အကြိုးပေးတယျဆိုတာ လောလောဆယျ ကံလိုကျနေ လို့ပါ။ လောငျးကစားသမားတှအေမြားစုကို ကွညျ့လိုကျပါ … ဘယျသူက လူမှေးလူရောငျ ပွောငျလို့လဲ။
ဒီလိုပဲ တဈခြို့က ငှရှေငျပွီဆိုရငျ မိနျးမဘကျ ကို လှညျ့တတျကွပါတယျ။ အပြျောအပါး ဘကျကို လှညျ့တတျကွပါတယျ။ အဲဒီလိုမိနျးမဆိုတာ ငှကေ ဘယျခလုတျကို နှိပျရငျထှကျတယျဆိုတာ သိပွီးသား မိနျးမလညျတှကေ မြားပါတယျ။
နောကျ ရောဂါဘယ ကူးစကျမှုရှိ၊ မရှိကလညျး စိတျမခရြပါဘူး။ သငျ့အတှကျ ဆငျးရဲ တှငျးနကျစမေယျ့ အမူအကငျြ့တှမေို့ ရှောငျရှားဖို့ လိုပါတယျ။
ထောကျပံ့ကွေးနှငျ့ ပတျသကျပွီး မကနြေပျမှုမြား အတှကျ တိုငျကွားမှု ဖွရှေငျးရေးဌာ နမြား ဖှငျ့လှဈ ပေးမညျ
ဆား(သို့မဟုတ်) ဆားငံရည် ဖြင့် ဘာလို့ ပလုတ်ကျင်း ခိုင်းရတာလဲ ..
ဆုတောင်းပြည့်လွန်းလို့ ‘မင်းညီမင်းသားတွေ မဖူးရ’ အမိန့်တော် ထုတ်ပြန်ပြီး သော့ခတ် လို့ အစောင့်တွေ ချထား ခဲ့ရတဲ့ ဆုတောင်းပြည့် ရုပ်ပွားတော်မြတ်အကြောင်း